जहाँ ड्राफ्ट ईन्स्ट्राममा बचत गरिएका छन् अनुयायी ▷ 🥇
जहाँ ड्राफ्ट इन्स्टाग्राममा भण्डार गरिएको छ
इन्स्टाग्रामले धेरै चोटि देखाइएको छ कि यसले आफ्ना प्रयोगकर्ताहरूले के सुन्छ भन्ने सुन्छ। यसको निरन्तर अद्यावधिकहरू र नयाँ प्रकार्यहरूको एकीकरण यसको स्पष्ट उदाहरण हो। यी पछिल्ला वर्षहरु को लागी सामाजिक नेटवर्क को लागी सार्वजनिक रुपमा प्रकाशनहरु सुरक्षित गर्न को लागी एक ठूलो संख्या को प्रयास गरीरहेको छ। बिभिन्न प्रकार्य र विशेषताहरूको साथ यी प्रत्येक। यस पटक हामी इन्स्टाग्राम ड्राफ्टको बारेमा कुरा गर्ने छौं। हामी जान्दछौं कि उनीहरू कसरी काम गर्छन् र जहाँ इन्स्टाग्राम ड्राफ्ट भण्डार गरिएको छ।
यसको डिजाइन अनुसरण गर्दै, इन्स्टाग्रामले ड्राफ्ट ड्राईभको एक फारम लागू गरेको छ जुन प्रयोगकर्ताको लागि प्रयोग गर्न सजिलो छ। इन्स्टाग्राम ड्राफ्ट इन्स्टग्राम भित्र फोटोहरूको सम्पादन र प्रकाशन गर्न सहयोग पुर्‍यायो।
इन्स्टाग्राम ड्राफ्ट के हुन्?
केहि समय अगाडि इन्स्टाग्रामले यसको प्लेटफर्ममा ड्राफ्टहरू लागू गरेको थियो। ड्राफ्टले फोटो सम्पादन गर्न र यसलाई तुरून्त प्रकाशित नगर्ने काम गर्दछ, तर पछि प्रकाशनको लागि बचत गर्नुहोस्। कुरा अनुप्रयोगले देखा परेको बेलादेखि नै प्रयोगकर्ताहरूले सोधिरहेका छन् भन्ने कुरा। ड्राफ्टहरू दुबै आईओएस र एन्ड्रोइड उपकरणहरूको लागि उपलब्ध छन्। जे होस् ड्राफ्ट प्रयोगकर्ताका लागि पर्याप्त उपयोगी छ, तर कार्यक्षमता अझै सीमित छ। यी सीमाहरू मध्ये एक तथ्य यो हो कि ड्राफ्टहरू फोनमा भण्डारण गरिएका छैनन्, तिनीहरू केवल यो मञ्चमा गर्दछन्।
ड्राफ्टको प्रकार्य प्रयोगकर्ताहरूको लागि धेरै उपयोगी छ जब तिनीहरूसँग इन्टरनेट जडान छैन। इन्स्टाग्रामले उपभोक्ताहरूलाई पछि प्रकाशनको लागि फोटोहरू बचत गर्न अनुमति दिन्छ। अर्को हामी कसरी देखाउने र कसरी बनाउने भन्ने कुरा हामी तपाईंलाई देखाउनेछौं जहाँ इन्स्टाग्राम ड्राफ्ट भण्डार गरिएको छ.
इन्स्टाग्राममा ड्राफ्ट कसरी सिर्जना गर्ने
हामीले पहिले नै उल्लेख गर्यौं कि ड्राफ्टले नामले भने जस्तो छ कि फोटो सम्पादन गर्नका लागि काम गर्दछ र ड्राफ्टको क्षेत्र भित्र बचत गर्छ र त्यसलाई प्रकाशित गर्छ। इन्स्टाग्राम भित्र ड्राफ्ट सिर्जना गर्ने तरिका निम्नानुसार छ:
यो स्पष्ट गर्नु पर्छ कि ड्राफ्ट मात्र इन्स्टग्राम अनुप्रयोग भित्र काम गर्दछ। त्यसैले आधिकारिक वेबसाइटका प्रयोगकर्ताहरूका लागि ड्राफ्ट बनाउन असम्भव छ। ड्राफ्ट बनाउनको लागि पहिलो चरण अनुप्रयोगबाट तपाईंको इन्स्टाग्राम खाता पहुँच गर्नु हो।
इन्स्टाग्राम गृह स्क्रिनमा तपाईं तल एक सानो मेनु देख्न सक्नुहुन्छ। यस मेनूमा पाँच आइकनहरू छन्। तेस्रो आइकन (बीचमा दायाँ) प्लस चिन्ह हो। यो प्रकाशनको लागि हो, तपाईंले प्रतिमा थिच्नु पर्छ।
मस्यौदा बनाउन लगभग समान प्रक्रिया सामान्य प्रकाशनमा गरिन्छ। यस चरणमा धेरै विकल्पहरू देखा पर्नेछन्, नयाँ र पुरानो दुवै इन्स्टाग्राम भित्र। एक बुमेराrang्ग बनाउन कोलाज, कोलाज बनाउन विकल्प, धेरै फाईलहरू छनौट हुनेछन्। तपाईले अर्को तल्लो मेनु पनि देख्नुहुनेछ, केवल योसँग पाँचको सट्टा तीन विकल्पहरू छन्। पहिलो विकल्प ग्यालरीबाट फोटो छनौट गर्नु हो। दोस्रो अनुप्रयोग भित्र फोटो लिनु हो। तेस्रो विकल्प भनेको भिडियो बनाउनु हो। मस्यौदा बनाउनको लागि तपाईंले पहिलो विकल्प चयन गर्नुपर्नेछ।
जब तपाईं आफ्नो ग्यालरीबाट फोटो छनौट गर्नुहुन्छ, अर्को थिच्नुहोस्।
तपाईंलाई मनपर्ने फिल्टरको साथ फोटो छनौट गर्नुहोस्।
तपाईंले छनौट गर्नुभएको फोटो सम्पादन समाप्त गरेपछि, फेरि प्रेस गर्नुहोस्।
एकपटक तपाईले अर्को थिच्नु भए पछि, इन्स्टाग्रामले तपाईंलाई क्याप्शन लेख्न लानेछ। साझेदारीमा थिच्नुको सट्टा तपाईले के गर्नु पर्छ फिर्ती हो।
फेरि प्रेस गर्न प्रेस गर्नुहोस् र इन्स्टाग्रामले फोटो ड्राफ्टको रूपमा बचत गर्न विकल्प सुरू गर्नेछ। तपाईं ड्राफ्ट बचत गर्ने कि नगर्ने थिच्न सक्नुहुन्छ।
ड्राफ्टहरू कहाँ छन्?
इन्स्टाग्राम ड्राफ्ट प्रयोगकर्ताहरूका लागि धेरै उपयोगी छ। प्लेटफर्मले तिनीहरूलाई फोटोहरूमा गरिएको परिवर्तनहरू बचत गर्नका लागि प्रयोगकर्ताहरूको लागि डिजाइन र सम्पादन गर्दा बचत गर्नुहोस् र तिनीहरूलाई प्रकाशित गर्नुहोस्। इन्स्टाग्राम ड्राफ्ट प्रयोगकर्ताहरूका लागि धेरै उपयोगी छ जसले ईन्टरनेट जडान छैन। किनकी तिनीहरू फोटोहरू सम्पादन गर्न सक्दछन् र त्यसपछि अपलोड गर्नुहोस् जब तिनीहरूमा पहुँच हुन्छ। इन्स्टाग्राम भित्रका अन्य सुविधाहरू जस्तै ड्राफ्टहरू पनि प्रयोग गर्न र फेला पार्न सजिलो हुन्छ। इन्स्टाग्राम कथाहरूको विपरीत। ड्राफ्ट मोबाइल उपकरण भित्र भण्डारण हुँदैन। बरु ठाउँ जहाँ इन्स्टाग्राम ड्राफ्ट भण्डार गरिएको छ यो मञ्च भित्र छ।
ठ्याक्कै ठाउँ जहाँ इन्स्टाग्राम ड्राफ्ट भण्डार गरिएको छ यो प्रकाशन मेनूमा छ। यी ड्राफ्टहरू पहुँच गर्न तपाईंले इन्स्टाग्राम अनुप्रयोगको तल्लो मेनुमा अवस्थित तेस्रो आइकन प्रविष्ट गर्नुपर्नेछ। यो प्रतिमा प्रविष्ट गर्नाले तपाईले अर्को मेनुमा तीन विकल्प देख्नुहुनेछ। यी मध्ये एक विकल्पलाई "ग्यालरी" भनिन्छ र यसलाई प्रविष्टि गर्दा तपाई आफ्नो मोबाइल उपकरणमा फेला परेका सबै फोटोहरू देख्नुहुनेछ। यदि तपाईंसँग कुनै ड्राफ्ट छ भने, यो पहिले देखा पर्नेछ। सामाजिक नेटवर्कको यो प्रकार्यका धेरै सीमितताहरू छन्। उदाहरण को लागी, उपयोगकर्ताहरु जो एक कंप्यूटर बाट इंस्टाग्राम पहुँच प्रकाशित गर्न सक्दैन, त्यसैले उनीहरु ड्राफ्ट बचत गर्न सक्दैन।
अर्को सीमितता, सायद यो कार्यक्षमताको सब भन्दा ठूलो यो स्थान हो जहाँ इन्स्टाग्राम ड्राफ्ट भण्डार गरिएको छ यो उही अनुप्रयोग भित्र हो। र मोबाइल उपकरण भित्र होईन, एक विकल्प जुन ईन्स्टग्राम कथाहरू भित्र उपलब्ध छ।
कसरी इन्स्टाग्राम ड्राफ्टहरू हटाउने
इन्स्टाग्राम प्लेटफर्ममा तपाईका ड्राफ्टहरू पनि हटाउन सम्भव छ। यो कसरी सम्भव छ? हामी तपाईंलाई यो व्याख्या गर्नेछौं। यो इन्स्टग्रामको लागि सामान्य हो प्लेटफर्मको बीचमा भएका परिवर्तनहरूलाई उल्ट्याउन विकल्प छ। त्यस्तो संग्रहीत प्रकाशनहरूको मामला हो जुन अभिलेख राखेर प्रयोगकर्ताको फिडबाट गायब भएपछि हो। तिनीहरूलाई अभिलेखबाट हटाउन सकिन्छ र प्रयोगकर्ताको प्रोफाइलमा फिर्ता गर्न सकिन्छ मानौं यदि के भएको छैन। यो बचत विकल्प भित्र राखिएका प्रकाशनहरूका साथ पनि हुन्छ। यस विषयको बारेमा इन्स्टाग्राममा धेरै उदाहरणहरू छन्।
परिवर्तनलाई उल्ट्याउने विकल्प ड्राफ्टका लागि पनि उपलब्ध छ। र यो धेरै सरल छ। हामी यो उल्लेख गरेर सुरू गर्नेछौं कि इरेजर मेटाउने दुई तरिकाहरू छन्। पहिलो दोस्रो भन्दा पनि सरल छ। तपाईंले गर्नुपर्ने भनेको इन्स्टाग्रामबाट लग आउट गर्नु हो। जब तपाईं यसलाई फेरि खोल्नुहुन्छ, ड्राफ्ट अब उपलब्ध हुनेछैन। अर्को तरीका यो छ:
तपाईंको इन्स्टाग्राम खाता प्रविष्ट गर्नुहोस्।
इन्स्टाग्रामको तल प्रकाशित आइकनमा क्लिक गर्नुहोस्।
तपाईंले ठाउँ थाहा पाउनु पर्छ जहाँ इन्स्टाग्राम ड्राफ्ट भण्डार गरिएको छ। तपाईले हटाउन चाहानु भएको ड्राफ्टमा क्लिक गर्नुहोस्।
क्याप्सन लेख्नको लागि तपाईंको इरेजर खाली स्थानको साथ देखा पर्नेछ। इरेजरको तल निलोमा सम्पादन गर्न विकल्प हो, यसलाई थिच्नुहोस्।
त्यसो भए मेट्ने इरेजरमा थिच्नुहोस्।
इन्स्टाग्राम ड्राफ्टका फाइदाहरू र नोक्सानहरू
इन्स्टाग्राम भित्र धेरै विकल्पहरू र प्रकार्यहरू मनपर्दछ। ड्राफ्टका दुबै नुकसान र फाइदाहरू छन्। अर्को हामी तपाईंलाई देखाउने छौं:
उनीहरूले तपाईंले इन्स्टग्राममा सम्पादन गरेको छवि बचत गर्दछ।
यदि तपाईं चाहनुहुन्छ भने तिनीहरू मेट्न सकिन्छ।
तपाईंसँग एकचोटि धेरै ड्राफ्टहरू हुन सक्छन्।
तपाईं पछि प्रकाशनको लागि गरिएका परिवर्तनहरू बचत गर्न सक्नुहुनेछ।
ठाउँ जहाँ इन्स्टाग्राम ड्राफ्ट भण्डार गरिएको छ यो सजीलो पहुँचयोग्य छ।
तिनीहरू केवल इन्स्टाग्राम प्लेटफर्ममा बचत हुन्छन्।
यो तपाईंको मोबाइल उपकरणमा बचत गर्न सम्भव छैन।
ड्राफ्टहरू बचत गर्न सकिदैन यदि तपाईं कम्प्युटर मार्फत आधिकारिक इन्स्टाग्राम पृष्ठबाट जडित हुनुहुन्छ।
यदि तपाईंले इन्स्टाग्राम सत्र बन्द गर्नुभयो भने तिनीहरू मेटिनेछन्।
इन्स्टाग्राम कथाहरूसँग तुलना
इन्स्टाग्राम कथाहरू इन्स्टाग्रामको सबैभन्दा ठूलो हालको आकर्षण हो। तिनीहरू पनि प्लेटफर्मको आधारभूत हिस्सा भएका छन्। आज इन्स्टाग्राम कथाहरू सब भन्दा प्रख्यात इन्स्टाग्राम प्रकार्यहरू हुन्। यो विचार अर्को प्रसिद्ध अनुप्रयोग स्नैपच्याटबाट लिइएको हो। तर, अब इन्स्टाग्राम कथाहरूको आफ्नै चरित्र छ। प्रयोगकर्ताहरूसँग यी कथाहरू सम्पादन गर्न विकल्पहरूको श्रृंखला छ। आज स्नैपचटबाट प्रेरित भए पनि इन्स्टाग्राम कथाहरूको आफ्नै चरित्र र इन्स्टाग्राम प्रकाशनका विशेषताहरू छन्।
के केहि ईन्स्ट्राम कथाहरू बचत भएको छैन सामान्य इन्स्टाग्राम पोष्टको तुलनासँग हो। तल हामी तपाईंलाई तिनीहरूको समानता र भिन्नताहरूको साथ सूची देखाउनेछौं।
फोटो र भिडियोहरू जुन ईन्स्टग्राम कथाहरू भित्रै सम्पादन गरिन्छ। तिनीहरू मोबाइल उपकरणहरूमा भण्डारण गर्न सकिन्छ तिनीहरूलाई प्रकाशन बिना नै। यो एक बचत विकल्प को माध्यम बाट। जबकि एक मात्र तरीका परिवर्तनहरू बचत गर्नका लागि फोटो वा भिडियोमा साझा गर्नुपर्दछ साझा इंस्टाग्राम पोष्टमार्फत तिनीहरूलाई प्रकाशन गरेर।
इन्स्टाग्राम कथाहरूमा धेरै सम्पादन विकल्पहरू छन् र केवल फिल्टरहरू मात्र होइन सामान्य पोष्टहरूमा जस्तै।
को Instagram कथाहरू जसले देख्छन् उनीहरूले तपाईंलाई सूचित गर्दछन्, जबकि अन्य प्रकाशनहरू गर्दैन।
तपाईं कथाहरू मनपराउन सक्नुहुन्न।
इन्स्टाग्राम कहानीमा कसैलाई टिप्पणी गर्न एक मात्र तरिका अनुप्रयोग निर्देशन गरेर हो।
इंस्टाग्राम कथाहरू 24 घण्टाको लागि मात्र देखिन्छन्, यदि प्रयोगकर्ताले तिनीहरूलाई मेटायो भने इन्स्टाग्राम पोष्टहरू मात्र गायब हुन्छन्।
दुबै प्रकाशन र कथाहरूमा, फोटो र भिडियोहरू हुन् स्वत: बचत गर्नुहोस् मोबाइल उपकरणको ग्यालरी भित्र।
दुबै फरक फिल्टरहरु द्वारा सम्पादन गर्न सकिन्छ।
तपाईं दुबैमा व्यक्ति ट्याग गर्न सक्नुहुनेछ।
इन्स्टाग्राम र फेसबुकको बिच सम्बन्ध